Kunyorera - Shenzhen XJCSENSOR Technology Co, Ltd.
XJCSENSOR ane hupfumi hwechiitiko chekuyedzwa kwemidziyo uye zvivakwa zveakasiyana maindasitiri akasiyana. Mimwe mienzaniso inosanganisira:
Sensor ndiyo yemagetsi module pane yakangwara robhoti. XJCSENSOR's joint torque sensor inoshandiswa zvakanyanya mukubatana kwerobhoti rakangwara. Inogona kuiswa padhuze nekukomberedza uye yekukoka mukombe werobhoti ruoko kubatsira robhoti kunzvenga zvipingamupinyi, kubatsira mukuona chokwadi chekuti chinhu chakabatwa chiri kudonha panguva yekufamba, kana chinogona kuiswa pane irikufamba robhoti, robhoti yemubatanidzwa, uye yekuvhara sikuru muchina.
XJC sensor ine akasiyana maficha mumotokari, uye nekuvandudzwa kwetekinoroji yedu, iyo sensor inofambira mberi zvishoma nezvishoma, iine diki saizi, kuvimbika kwakakwirira, kukwirira kwekushushikana, resolution yepamusoro, kuburitswa kwedhijitari zvichingodaro.
XJC yekudzvinyirira sensor bhatani mhando & S mhando inoshandiswa kuona yakasimba simba kana kumanikidza kunoitwa kana kupikiswa nechinangwa, senge muchina wekudhinda, yakanyanya kunyatso punch yekudhinda, muchina wekuyedza muchina, michina yekushandisa uye otomatiki kudzora system, metallurgical poda indasitiri extrusion kuumbwa midziyo.
Nekuvandudzwa kwemusika wezvigadzirwa zvekurapa, zvido zvepamusoro zvinoiswa pakushandiswa kwemasaini ekumanikidza muindasitiri yekurapa. Zvakanakira kukwirisa kwepamusoro, kuvimbika, kudzikama uye diki saizi yeiyo D yakateedzana muXJCSENSOR zvirokwazvo ndiwo musimboti wemidziyo yekurapa. Zvakajairika zvekushandisa zvinoshandiswa zvinosanganisira mibhedha yekurapa, pombi dzesirinji, zvekugadzirisa zvekurapa, marobhoti ekuvhiya, kure B-ultrasound michina, nezvimwe.
Iyo nyowani simba munda haina kumbobvira yawedzera kubudirira. Iko kushandiswa kweXin Jingcheng kumanikidza sensor mumunda wesimba nyowani kunosanganisira: XJC-S08 & XJC-D150 inoshandiswa mukumanikidza kugadzira muchina wepfava pack bhatiri, inopisa uye inotonhora yekudhinda, simba bhatiri kuumba muchina; tension sensor inoshandiswa kune winder, kupfeka Cloth muchina; XJC-D01 inoiswa kumvura jekiseni michina, nezvimwe.
XJC sensor nekuda kwekupindura kwayo nekukasira, resolution yepamusoro, yakapusa kuita isingabatanidzwe kuyera, kunyatso kujeka Kuvimbika kwakanaka, kwakabatana nehukuru hwayo hushoma, huremu hushoma, simba shoma rekushandisa uye kusangana kuri nyore, zvinoita kuti uwane nekukasira panguva uye kugadzirisa matambudziko. izvo zviri nyore kuitika mune zvekurima michini basa, uye zvinogona kusimudzira kuvandudzwa kwekurima michini michina uye kuona yekurima michini. Kuvimbika kwekushandisa, kuderedzwa kwesimba rekushandisa, uye chengetedzo mumasimba uye zviwanikwa.
XJC S-mhando kumanikidzwa Switch chinhu chakakosha chikamu ouinjiniya michini michina indasitiri; mashandisiro ayo anonyanya kusanganisira: yekutanga kutonga kweinjini mamiriro ekushanda; yechipiri kutonga kwe hydraulic system; chechitatu kudzora kwekuita kwese kweinjiniya michina; Aerial mota, makreyani, shongwe makira, makira, nezvimwe.
XJC D yakateedzana mutoro wesero ndiyo inonyanya kushandiswa kumanikidza sensor mune yekumaindasitiri maitiro. Iko kushanda kwayo kuri mune batching michina, yekupakira michina, kuyera uye kugadzirisa mhando michina, nezvimwe.
XJC sensor ndiyo inonyanya kushandiswa torque sensor mumunda we otomatiki maturusi. Iyo inogona kuona iyo torque uye axial simba ichiri kuona iyo torque. Iwo chaiwo maficha anosanganisira: dijitori torque wrench, dhijitari yemagetsi screwdriver, yakavharwa-loop torque mhinduro kusimbisa shaft, nezvimwe